Filtrer les éléments par date : dimanche, 17 septembre 2017
dimanche, 17 septembre 2017 22:29
24 ora tao amin’ny Morgue: "Nitsangana tamin’ny maty i Maître Karabo"
Naratra mafy nandritra ny fikasana hametraka Ben’ny Tanàna tany amin’ny Kaominina Ambahoabe, Distrikan’i Soanierana Ivongo i Maître Karabo, ny 10 jolay 2017. Nisy ny sakoroka nandritra izany, satria nanohitra ny fanatanterahana izany ny mpomba an’i Mananara Fidison na Rasomotra izay Ben’ny tanàna niasa taorian’ny fifidianana tamin’ny 31 jolay 2015. Sady voafira antsy no voatora-bato i Maitre Karabo nandritra izany.
Mpiambina manokana ny Prefen’i Fenoarivo Atsinanana izy. Noho ny fahaverezan-dra be loatra vokatry ny nahazo azy anefa dia tsy tàna ny ainy ka nalefan’ny mpitsabo tany amin’ny tranompatin’ny hopitalin’i Soanierana Ivongo araka ny fitantarany raha nitafa tamin’ny mpanao gazety sendra azy tamin’ny fahatongavany teto Ambatondrazaka, tanàna fiaviany.
Dokotera vahiny sendra nandalo, no niala nenina namelona azy niaraka tamin’ny mpitsabo malagasy tao Fenoarivo Atsinanana. Niverina niaina tsikelikely ilay noheverina fa maty izay efa tao amin’ny Morgue rahateo.
Misaotra ireo rehetra nifarimbona, sy nanolo-tanana nentina nitsaboana azy i Maître Karabo.
dimanche, 17 septembre 2017 22:17
RN 10: Fiara TATA nivadika, nieren-doza ireo mpandeha 30 nentiny
Fiara mpitatitra niala tao Toliara hiazo an’i Ejeda ity niharan-doza ity, vokatry ny haratsian-dalana. Tao anaty haizina no nitranga ny loza. Nampidinina ny mpandeha rehefa hiditra lalan-dratsy ilay fiara. Rehefa nitongilana anefa ilay fiara dia naronjon’ny entan’ny mpandeha tao ambony tafo, ka iny no nitarika azy hivadika. Nisy fahasimbana ilay fiara, nieren-doza kosa ireo mpandeha.
dimanche, 17 septembre 2017 22:16
Grevy teo Marofototra RN34 : Olona miisa dimy nosamborin'ny Zandary
Tantara mitohy ny olana amin'ny fitantanana ny ranon'i Dabaraha. Taorian'ny fitokonan'ny Fokonolona teo amin’ny tetezan’i Marofototra, Kaominina Bemanonga ka nahatapaka nandritra ny ora roa ny fifamoivoizana tamin’ny lalam-pirenena faha-34 ny talata 12 septambra 2017 vokatry ny fanehoan'izy ireo ny tsy fahafaliany ka nitakiany vahaolana haingana, dia roso tamin'ny fisamborana ireo mpitarika iny grevy iny ny Zandary.
Dimy lahy no voasambotra ny sabotsy 16 septambra ary notazomina tao amin'ny Borigadin'ny zandary Morondava. Vao nahare izany ireo tantsaha manana tany tondrahan'io ranon'i Dabaraha io ao amlin'ny zone Delta, zone Intermédiaire, ny avy eny amin'ny sampanana miazo an'i Belo Tsiribihina dia nifampitaona fa hanao rodobe hiakatra eto Morondava ka ho eny amin'ny biraon'ny Zandary sy ny tranon'ny Préfet.
Nikoropaka ny manampahefana eto Morondava manoloana ny mety ho fiantraikan'izay rodobe hiakaran'ireto Fokonola entin-katezerana ireto. Mety ho izay no namotsorana azy dimy lahy androany maraina, rehefa nampanaovina taratasy fanekena.
dimanche, 17 septembre 2017 18:50
Village Touristique – Mahajanga: Maninona no manono olona isan-taona?
Mila ho isan-taona no itrangana faty olona eo amin’ny Village Touristique nefa toa tsy misy olona mandray andraikitra mba tsy hiverenan'izany. Iza no tompon'andraikitra voalohany amin’izany?
dimanche, 17 septembre 2017 18:16
Sambava: Nandravarava ny afo, may ny trano 04
"May noho court-circuit Jirama ny tranonay" hoy tompontrano satria avy teo amin'ny Compteur Jirama no nirehitra voalohany ny zoma tamin'ny 12ora 33min teo ny trano anefa mihidy. Izay no nanaitra ny olona tamin'ny trano manodidina izay nihazakazaka hanomo ny afo, nefa nalaky niitatra ny afo ka tsy voafehy. Trano 4 no rava. Tsy mbola voatombana ny tentimbidin'ny entana simba.
Olana eto Sambava ny tsy fananan'ny tanàna fiara mpamonjy voina ka mandravarava ny afo.
dimanche, 17 septembre 2017 16:24
Matsiatra Ambony: Tapaka ny tetezana eo Akidomby-Vohiposa RN7
Tamin'ny 11ora 20 no nitranga ny lozam-pifamoivoizana. Efa mandray ny andrikiny ireo Fokonolona amin'ny fanamboarana fivilian-dalana amin'izao fotoana izao.
Hatramin'izao ora fampitam-baovao izao dia ireo fiara tsy mataho-dalana na 4x4 ihany no fantatra fa tafita an'io "déviation" io.
Raha ny fanampim-panazavana nentin'ny mpitandro filaminana nanao ny fizahana ifotony dia tsy tokony hihoatra ny 30 taonina ny vesatra mandalo amin'io tetezana io.
Hisy fiantraikany amin'ny famatsiana solika iny tapany atsimon'ny Nosy iny ny fahasimban'ity tetezam-by ity, vokatry ny fahasimban'ny Port Manakara mantsy dia taterina amin'ny kamiao avy any Toamasina ny solika mamatsy an'i Fianarantsoa.
dimanche, 17 septembre 2017 14:45
Vohiposa RN7 : Le pont Bailey s'est effondré au passage d'un semi-remorque
La Nationale 7 est coupée depuis ce midi suite à un pont enjambant une rivière à Vohiposa, au nord d'Ambohimahasoa, qui a cédé.